Moments Neshamwari 54
Ndeye magnetism, mesmerism, uye hypnotism zvakabatana, uye kana zvakadaro, zvakabatana sei?
Simba remagineti isimba rine chekuita nemagineti inoonekwa mumiviri isingaoneki, yakadai seyekugara nemagineti esimbi. Simba rimwe chetero rinomutswa kune rakakwirira simba mumiviri yemhuka. Simba remagineti ndiko kushanda kwesimba kuburikidza nemiviri yemiviri iyo iri yechimwe chimiro, zvine chekuita nekumhara, kuitira kuti chimiro chinogona kupinza uye chobva chashanda sedanho rinotungamira simba remagineti kune mimwe miviri yemuviri.
Mesmerism izita rakapihwa kushandiswa kwenyonganiso yemhuka, mushure meMesmer (1733-1815), uyo akawana zvakare akazodzidzisa nekunyora nezve simba pano rinonzi mhuka zvemagineti.
Mesmer, dzimwe nguva, yaishandisa mhuka zvemagineti zvisikwa; dzimwe nguva aishandisa pfungwa dzake zvine chekuita nemagineti. Maitiro ake anonzi mesmerism. Akatungamira magineti sesimba rinosimuka kuburikidza nemazino eminwe yake kupinda mumuviri wevarwere, nekudaro achigadzira dzimwe nguva kurara, kwainzi mushure make mesmeric kurara, uye kazhinji kurapa kwakatevera. Aiwanzoisa murwere, apo murwere anga ari pasi peMesmeric pesvedzero, mumatunhu akasiyana, kune ayo anoti Mesmer akapa mazita akasiyana. Nzira dzake uye kusiyanisa kwakataurwa nevazhinji vanyori pachinhu icho.
Hypnotism ndeye, sezita rinoratidza, iyo inokonzeresa rudzi rwekurara. Kuzvinyengedza ndiko kukonzera kwekurara kuburikidza nezviitwa nepfungwa yako pachako kana mumwe zvake kana muchidimbu achidzima nheyo yake yekuziva kubva pakubatana neyekuziva nzvimbo iri muuropi hwake. Hypnotism kazhinji ndeye kushanda kweimwe pfungwa pamusoro peimwe, paine kana pasina rubatsiro rwemagineti yemhuka, zvekuti kurara kweiyo hypnotic nyaya kunokonzerwa nekuita kweanoshanda kana achinge apindira zvachose kana zvimwe nekubatanidzwa kwenheyo inoziva uye pakati pahwo iro rinoita nekuchenjera muuropi hwechinyorwa. Iko kurara kwekunyepedzera, kunokonzerwa nekuvhiringidzwa nekubatanidzwa kweiyo nheyo inoziva uye iyo nzvimbo iri mukati mekuita nehana, inosiyana neyekurara chaiko.
Mukurara chaiko mweya yehungwaru kana yekuziva inofamba kubva pane inoziva nzvimbo iri muuropi, kuti hunhu hugadzore muviri uye hudzore kuenzana pakati pemasero. Iyi nhungamiro inoziva inogona kudzungaira pakati penzvimbo dzenjere dzeuropi, kana kuti inogona kudzoka kupfuura nzvimbo idzi. Kana nheyo yekuziva ichiramba yakakomberedza imwe kana dzinopfuura nzvimbo dzinosangana nekuona, kunzwa, kunhuhwidza, kuravira, ipapo hope dzekurara, uye zviroto zvake zvekufunga kwakashata, kungave kwepanyama kana kwenyika yemukati yakabatana neyemuviri. Mukurara hope dzisina hope nheyo inoziva inoramba ichiziva, asi sezvo ichibviswa kubva mupfungwa, murume haazive kududzira izvo zvaanoziva.
Kugadzira hypnotic kurara ndiko kukanganiswa nefungwa inoziva yeumwe, iye asingakwanise kana kuramba kuramba kupindirwa. Kana nheyo yekuziva yechidzidzo ichibva yaendeswa kure nenzvimbo yayo yekuziva, iyo yakabatana nguva yekumuka, iyo nyaya inowira pakurara kwekunyepedzera, iko kurara zvishoma kana kwekusaziva, kurara, Hypnotizer yabudirira kutyaira iyo nheyo yekuziva yechinyorwa. Munguva yekurara kwehunyengeri iyo hypnotist inogona kukonzera iyo nyaya kuona kana kunzwa kana kuravira kana kunhuhwirira kana kunzwa chero pfungwa dzinogona kuitika mukumuka, kana iye anogona kukonzeresa nyaya yacho kuita kana kutaura izvo hypnotizer inoda kuti aite kana kutaura, ne kunze kwake chete, zvisinei, kuti haakwanise kumanikidza mumwe munhu kuita chiito chounzenza icho chingave chinosemeswa kune hunhu hwechinhu ichocho mukumuka.
Pfungwa yomubatiri inotora nzvimbo yenheyo inoziva yechidzidzo chake, uye chinyorwa chinozopindura uye nekuteerera pfungwa nekutungamira kweiyo hypnotizer, zvichienderana nekujeka uye simba rekufunga kweiyo hypnotizer uye danho raanobata naro. nehuropi hwehunhu hwechinyorwa.
Mhinduro kumubvunzo wehukama hwehukama hwemagineti, mesmerism, uye hypnotism ndeyekuti mhuka yemagineti, iri simba rechisimba inoshanda kubva mumuviri kuenda mumuviri, ine chekuita nemiviri yemunhu; mesmerism inzira yekushandisa mhuka zvemagineti; hypnosis ndiyo mhedzisiro yekushandiswa kwesimba rerimwe pfungwa rakapedzerwa pane imwe pfungwa. Izvo zvinokwanisika kuti pfungwa dzigadzike masimba emagineti nekuraira kuyerera kwesimba remagineti. Anodzvinyirira anogona kufanoronga nyaya yekuzviisa pasi kwekutanga nekushanda nemagineti yemhuka pachinhu; asi mune yavo yemagineti yemagineti uye neiyo hypnotic simba rakasiyana kubva kune mumwe nemumwe.
Mhuka magnetism inogona sei kushandiswa, uye inogona kuiswa kupi?
Simba remagineti remurume rinogona kurimwa nekuita muviri wake simba remagineti uye nzvimbo iripo iyo simba rehupenyu hwese, rinoshanda seanokwezva. Iye murume anogona kugadzira muviri wake magineti kune hupenyu hwese nekukonzera nhengo dziri mumuviri wake kuti dziite mabasa avo zvisikwa uye zvakajairika uye nekudzivirira kwakawandisa pakudya, kunwa, kurara uye kutonga kwehunhu hwenyama. Aya akawandisa anoguma nekuputsa bhatiri rekuchengetedza, iro risingaonekwi chimiro chemuviri wenyama, dzimwe nguva chinonzi inonzi astral body. Kuvepo kwekunyanyisa kunobvumira iyo fomu yemuviri kuti ive yakasimba uye zvinokonzeresa kuti zvishoma nezvishoma polarization uye kugadzirisa kweamorekuru ayo akambotaurwa. Kana ikavakwa kudaro fomu yemuviri inova dosi remagetsi.
Mamwe emashandisirwo anogona kuitwa nemagineti yemhuka ndeyekugadzira simba remagineti, kuita kuti muviri uve wakasimba uye hutano kurapa chirwere mune vamwe, kuburitsa maginiti kurara - izvo hazvifanirwe kuitwa zvisizvo kurara kwepfungwa-uye nekudaro clairaudience uye clairvoyance, uye kutaura kwekuporofita, uye kugadzira mashiripiti mhedzisiro, sekuraira talismans uye maamulets ane masimba emagineti. Chimwe chezvakanyanya kukosha zvekushandisa izvo mhuka zvemagineti zvinogona kuiswa ndeyokuenderera mberi nekusimbisa nekudyidzana kwemuviri fomu isingaonekwe kuitira kuti ivakwezve uye ivandudzwe uye pamwe isingafi.